XUMURA GABRUMMAA MIRKANEESSUUF, HUMNA TA’UUN MURTEESSAADHA!!!!! -
SEENAA Y.G (2005), Kutaa 3ffaa fi xumuraa.
Ummati Oromoo kan yeroo kamirrayyuu caalaa waliif birmatee sochiin biyya keessaa fi alatti gaggeessaa jiru, hawwii fi fedhii ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa’amanii kan dhugeessee fi hamilee yoomillee keessaa ba’uu hin dandeenye kaa uumeedha. Abdii fi murannoon ilmaan Oromoo keessa jiru, akka sibiilaa kan itti jabaatee fi waan dabree dhiisee hegaree isaa tolchuuf, humna ta’uun murteessaa ta’uu kan itti hubateedha. Wareegama barbaachisu kafalee, waan dhufuu maluuf of qopheessaa jiraachuu argaa jirra. Kun miira wareegama ulfaataan argameedha. Kana kunuunsuu fi sochii kana caaluu gaggeessuuf, ofii fi qabeenyaa ofiillee kennuun barbaachisaa ta’uu hunduu kan irratti walii gale fakkaata. Qaamni dhimmi kun isa ilaallatu, haala kanatti dhimma ba’ee, Ummati kun humna ta’ee akka ol ba’uuf, hojiilee Ummata kana irraa eegaman bifa gara garaan qopheessee, Xumura Gabrummaa kana akka shaffisiisu hin shakku. Yaada kutaa 2ffaa keessatti kaasee wayitan xumuru, gaaffiilee tokko tokko kaasee, deebii isaa kutaa 3ffaa keessatti qabadhee akkan dhihaadhu kaa’eera. Gaffiileen kaasee, dhaabbilee siyaasaa keenya irraa maaltu eegama? Qeerroon sochii itti jiru jabeessuuf maal gochuu qaba? Nuuti gaaffii keenya dhaga’aa jechaa jirra. Diinni ammoo Oromiyaa keessaa akka isa baafnuuf garaa nu jabeessaa jiraa qophii qabnaa? Kan jedhuudha. Har’as yaadoota ka’umsaaf ta’aniin kaasa malee, waa hundaa hin katabu. Dhala Oromoo rakkoon mana isaa isa seentee jirtu kanatti fala himuun har’a qoosaadha. Ykn Oromoon dubbiin hin galuuf jedhanii tuffachuudha. Falli isaa maal akka ta’ee har’a akka gaaritti hubatee hojiin argisiisaa jira. Har’a waan waliif dhaamnu waan hegaree keessatti (waggaa 5, 10, 15, 20 …) nu mudachuu danda’uu malee, Oromoon har’aa fi boruu keessatti waan raawwatuu qabu walitti hin himnu.
A. DHAABBILEE SIYAASAA OROMOO IRRAA MAALTU EEGAMA?
Har’a humnoonni fi namoonni hedduun ibsoota adda addaa fi waamicha adda addaa dhiheessaa jiran. Waan gaggeeffamaa jiru illee nuutu duubaan jira jedhanii abbaa itti ta’uuf ibsaa fi labsii adda addaa baasan. Sochiin amma jiru kan Ummata Oromooti. Akka bara Fiwudaalootaa kan Abbootii Lafaa miti. Sammuu akkas yaaduun akkamiin Ummataaf dhaabbannee jedhan akka dubbatan namaaf hin galu. Sochii har’aaf wareegama kan itti baasee, Ummata Oromoo fi Ijoollee Biyya keessaa wareegama Ulfaataa baasaa jirtuutu deebii quubsaa yeroo isaatti itti kenna. Adeemsa akkasii irraa of qusachun garuu hedduu barbaachisaadha. Dhaabbileen siyaasaa OROMOO walabummaa qabanii fi Oromoof dhaabbachuu isaanii wareegama baasuun mirkaneessaa jiran, waan hunda irra keessa isaanii caalaatti jabeessanii, yeroo barbaachisaa ta’eetti akkaataa keessaa fi alatti wal tumsuu danda’an irratti haalaan hojjachuu qaban. Wayyaaneen dhaabbilee Oromoo wal dura dhaabuun hojii ishee itti aanu ta’uu ni mala. Kanaaf, keessa ofii cufatanii hojii ifaa fi dhoksaa ofii adda baafatanii bakka murteessaa ta’e irratti sagalee walii laachuuf, waamicha addunyaa irratti sagalee tokkon dhaabbachuuf, of qopheessuutu irraa eegama. Adda durummaan ABOn kan yeroo kamirrayyuu caalaa keessaa fi ala isaa haalaan jabeesseee, yaada Ummataa dhaggeeffatee Ummata dhiigaa fi lafee isa godhate kana ijaaree sochii caalaaf qopheessuutu irraa eegama.
Dhaaboonni siyaasaa Oromoo maqaa OROMOOn dhabbatanii Wayyaaneef daboo ba’an, dhaabbilee mormitootaa fakkaatanii OPDO waliin warra kaan sagalee dhabsiisaa jiran, ijoolleen isaanii yeroo dhumtuu fi warri kaan mootummaatti haqa jiru himanii ejjannoo isaanii yennaa beeksifatan, harcaatu opdo irraa argataniif jecha callisanii kan jiran, gara itti goruu barbaadan akka beeksifataniif Ummati dirqisiisu qaba. Boruu ijoolleetti hiriira ba’uuf shira wayyaanee milkeessuuf kan foolataa jiran isaan waan ta’eef. Dhaabbileen walaba ta’an garuu yoo xiqqaate wal danquu irraa tasumaa of fageessuu qabu. Daboo halgaa fi firaa adda baafachuu qabu. Kana irra yoo taree garuu, gara laafessummaa miidhama keenya jabeessu haquun filmaata biraa hin qabu.
B. BEEKTOOTA KEENYA IRRAA KAN EEGAMU:-
Beektoonni keenya waan adda baafachuu dadhabanii of hidhanii taa’antu jira. Silaa isaantu waa baayyee qajeelchuu fi hegaree siyaasa keenyaa tilmaamee, dhaabbilee siyaasaaf yaada kenna ture. Haala addunyaa fi adeemsa siyaasaa addunyaa gilgaalanii waan ta’uuf deemu tilamaamanii, dhaaboota siyaasaa qajeelchuuf yaaluun, ga’ee isaanii ture. Garuu waan kana waan hubatan hin fakkaatan. Hundi isaanii dirree siyaasaa irratti wal-qabanii, dandeettii fi ogummaa isaanii awwaalanii irra taa’aa jiran. Hundatu akkasii jechuu miti. Garuu otuu walitti dhufanii addunyaa irratti dhimma keenya fudhachiisuuf waloon hojjatanii, wareegama baafnu hanqisu danda’u turan. Akka Ogummaa fi beekumsa isaanitti wal ijaaranii bu’aa buusuu danda’an irratti hin hojjatan. Dhaloota boriif waan kaa’aan hin qaban. Rakkoon ture dhaloota itti aanutti akka dabruuf callisanii ilaalaa jiran. Ijaaramuun murteessaa ta’uu inuma dubbatan. Ofii ijaaramuu dhabuun ammam akka isaan miidhellee ni dubbatan. Garuu har’allee dhaloota ijaaraa hin jiran. Kun hanqina guddaadha.
TPLF (wayyaaneen ) beektoota isaanii addunyaa irra jiran Ijaarrataniin bosonaa kaaseenii tarkaanfataa asi ga’an. Gorsitoota hedduu qaban. EPLF beektoonni isaanii hedduun yaadaan gargar fagaatanis, dhimma Biyyaa taanaan humna biyya bulchaa jiru gorsaa fi yaada kennaafii jiran. Ameerikaan har’a addunyaa akka barbaaddee gochaa jirtu kan dhaabanii jiran Obaamaa faa’aa miti. Naasaa fi beektota isaanii siyaasa addunyaa waggoota 50 dhufaniif gaggeeffamu malan tilmaamanii adeemsa isaan baasaniin tarkaanfatti. Addunyaa hundi akkasii. Keenyawoo? OSAn dhimma Oromoo irratti qorannoo siyaasaa hedduu gaggeessan. Qorannoo kana keessaa dhaabbilee siyaasaaf kenneeraa ? Abbaan fedhe ka’ee ABOn anadha jedhee ummata yeroo burjaajessuu seenaa waggoota dheeraaf qorate ilaalee Ummataaf yaada mataa fi haqa jiru dubbachuu osoo danda’uu callisuun, dhugaa ummata kana tikisuu hin ta’uu. Kanaaf, beektoonni keenya dhugaa ummata keenyaa dubbachuu fi abbaa fedhee sirreessuuf mirga guutuu qabaachuu, yeroo qabsoon Oromoo haalaan jabaatee karaa qabaachaa jiru kanatti rakkoon dabree akka irra hin deebineef ga’ee ofii gama hundaan ba’uuf qophii taasisuu, beektoonni bakka jiranitti Lammummaa Biyyoota kamittu qabaachuu waan danda’anif kanatti dhimma ba’anii gurmuun waan saba isaanii falmuutu irraa eegama. Beektooni dirree siyaasaa irratti wal-qabuu dhaabuu qaban. Dirreen beekumsaa fi ogummaa isaanii dirree siyaasaa akka caalu amanuu qaban. Abbootiin seeraa ijaaramanii daandii isaan itti jiran hedduu kan nama jajjabeessuudha. Dhimma Oromiyaan wal qabatee sadarkaa addunyaatti waan falmachuu nu barbaachisu waan danuutu jira. Bifa kanaaf of qopheessuuf ga’ee isaaniif qophaa’uu qaban. Hundu akkasitti dhaabbachuu qaba.
C. HOJJATTOOTA MOOTUMMAA:-
Hojjattoonni Oromoo Mootummaa Oromiyaas ta’anii fedaraalaa irra jireessi isaanii Fincila Diddaa Gabrummaa (FDG) bara 2000 kaasee gaggeeffamu keessatti qooda ol aanaa kan qabaniidha. Garuu, hojii argannaan callisanii ta’uun isaanii hedduu nama raaja. Bilisummaa fi hojii argachuun waan addaan fagoo jiranidha. maaliif ijoollee bira dhaabbatanii hojii dhaabuu dadhaban? Maaliif dhiiga obbolaa isaanii fi reeffa obbolaa isaanii awwaaluu fi imimmaan buusuufiin qofa hafan. Amma yoomitti bo’aa jiraatu? Bilisummaan ijoolleen kun dhumaafii jiran isaaniif gabrummaa ta’uu isaatii? Osoo isaan ijoollee kanaaf humna ta’anii lubbuu ijoollee hedduu baraaruu akka danda’an ni hubatuu? Hojjattoonni Oromoo bakkaa fi bifa kamiinuu mindaan jiraatan, wayyaaneen isaaniif warqee haftee, ijoollee kanaaf qoraatti hin hafnee. Dhala Oromoo hundaaf qoraatti haftee dhiigaa akka jiraatan taasisaa jirti. Kanaaf, dabeessummaa mindaadhaan bitattan of irraa kaasaa gataa. Har’a bakka wareegamaatti kan isin dhabnee, boruu bakka sirbaatti walitti baana. Gaafas wal taajjabnaa qalbifadhaa!!!
D. UMMATA OROMOOF:-
Ummati Oromoo sadarkaan qabsoo isaa irra ga’ee jiru, isa dhumaati. Xumura Gabrummaa mirkaneessuudha. Sochiin ati gochaa jirtu diinaaf har’allee qoosaa ta’ee, dhiiga dhangalaasuun filannoo isaa ta’eera. Sirratti garaa jabaachuun ala furmaata biraa hin qabuu jechaa jira. Waan lubbuu isaaf hin sodaachifne karaa cufuun kee, isaaf qoosaa ta’eera. Karaa nagaa gaaffii dhiheessuun kee, wayyaaneef kadhaa ta’eera. Ulee fi dabtara baattee hiriiruun kee wayyaanootaaf dabeessummaa ta’eera. Mirga ati gaafatteef deebiin rasaasa ta’ee, daa’iima waggaa 7 illee ajjeesuu ta’eera. Kana irra maaltu jira? Lubbuu nama 170 dhabdee har’allee karaa nagaa gaaffii kee itti fufuun, wareegama biraa dabalaa jira. Irraa hin bitinii fi itti hin gurguriin jettee garaa bal’chuu fi karaa miidhaa hin qabneen yaaduun kee, ajjeechaa jumlaa irraa si hin baafne. Dhalli Oromoo fageessee hegaree Ummata kana lamaanii gidduu yaadee dogoggora isaanii itti argisiisuuf yaalee hundumtuu, wayyaanee caalaattu irree ta’eef. Akka ati waa ajjeesuu fi of irraa dhorkuu hin dandeenyetti, yaadi kee kan dabeessaa ta’eeti, dhaloota jiilchuuf ijoollee Asfaaltii irratti gonbisuun filmaata isaanii ta’ee jira. Kanarra miidhaan hin jiru! Kana irra tuffiin hin jiru!
OROMOOn sochii jalqabeen milkaa’uu barbaada taanaan, gara jabummaa fi Tigiree Oromiyaa keessaa qulqulleessuuf of qopheessuu qaba. Kana gochuuf ammoo tarkaanfiin jalqabaa wayyaaneef warra riqicha ta’an osoo hin hafnee OROMIYAA keessaa baasuudha. INGILIZIIN Afirikaa kibbaatti mogoleen kan jalatti cabe, Abbootiin Biyyaa jala adeemtoota isaanii Gommaa fi gaazaan gubuu yennaa jalqabaniidha. Gurraachi tarkaanfii Ummata isaa kana argee guyyoota muraasa keessatti diinaaf qawwee baachuu dhaabe. Isa booda Abbaa Biyyummaa warra gurraachaa mirkanaa’ee. Kan nu eeggatu kanuma. Wayyaanee Oromiyaa keessaa ariinu, dachee saboota olla keenyaa akka hin qubanneef, isaaninis ijaarree tarkaanfii wal-fakkaataa akka fudhatan taasisuu, barbaachisaa taanaan, ofii keessatti hirmaatanii dantaa ofii kabachisuu barbaachisa. Kanaaf, amma sadarkaa lubbuu lammii ofii baraaruu irra waan jirruuf tarkaanfiin akka namummaatti yaannee hundumtuu of tuulummaa wayyaaneen waan cabeef, sochii itti aanutti ce’uun barbaachisaadha.
E. HAWAASA OROMOO BIYYOOTA HANBAA JIRAATANIIF:-
Hawaasi Oromoo Biyyoota alaa jiran sochii itti jiran caalaatti itti fufu qabu. Gargaarsa barbaachisu dhiheessuuf, waan wal irraa hin cinne akkaataa itti gaggeeffatan irratti mari’achuu, hiriira sagantaa mataa isaa qabu irratti hojjachuu, ilmaan Tigireetti dhihaatanii of-tuultoonni isaanii badii kana caalaa ofitti fi Ummata Tigiree irratti osoo hin fidiin akka irraa dhaabbataniif dhaamsaa fi hubachiisa kennuu, amansiisuun irraa eegama. Dantaa keenyaaf waan hojjannu irratti garaa bal’annee, aarii fi jibba of-keessatti qabannee waan har’a hojjachuu qabnuu seeraa fi sirnaan gaggeessinaan bori gaabbii keessaa akka baanuu fi dhugaa qabu akka jedhan taasisuu qabna. Sochi siyaasaa gaggeessinu keessatti qaawwaan akka hin umamneef adeemsa keenya bal’ifachuun, hundumtuu akkaataa jireenyaa fi walitti dhiheenyaan gumaacha irraa eegamu akka taasisu haala mijeessuun Ummata keenyaa fi dhaabbilee siyaasaa keenyaaf humna ta’uuf hojjachuun fardiidha. Tokkummaa ijoolleen barattootaa dhiigaan mirkaneessan mirkaneessuun, akka nama tokkotti hojjachuu, Oromiyaaf AMBBAASADDARA godhanii of muudanii hojjachuun dirqama keenyaa jennee fudhachuun sochii jiru bifa hundaan finiinsuun barbaachisaadha. Humna qabnu miseensa taasisuun ykn miseensa ta’uu qofaan of daangeessuu dhiisanii, dhimmi Ummata koo dhimma kooti jedhanii cichoomiinaan dhaabbchuun, qabsoo ofiif human ta’uun murteessaadha. Sochiin amma jiru caalaatti jabaachuu qaba. Gargaarsa Oromiyaaf taasifnuu kan umurii guutuu jechuun murteeffachuun dansaadha. Gootummaadha! Maaliif jennaan ijoolleen Biyya keessaa lubbu isaanii Umuriin olii waan nu kennaniif. Walumaa galatti Sochii ofii bifa hundaan jabeessuu fi dhibdee nuu fi wayyaanee gidduu jiru caalaatti diimeessuun murteessaadha. Falli jiruus kanuma!
F. WARRA WAAMICHA BAAYYIFATANIIF:-
Humnoonni fi namoonni hedduun dhaabbilee siyaasaa Oromoof waamicha godhan. Ijoolleef dhaqabaa kan jedhu. Har’a eessa jiraachuu keessan mirkaneessaa kan jedhu. Kun haqummaa kan qabu fakkaata. Jecha kana Oromoonni abdii akka kutataniif, dhaabonni siyaasaa Oromoo hin jiranii isinin hin jennee, kanneen jechuu barbaadaniin illee hololamu danda’a. Warri wareegamu ijoollee arganiinis dubbatamu danda’a. Garuu waamicha taasisuun furmaata hin ta’u. Sochiin jiru kaayyoo isaa galmaan ga’uu irra taree, walabummaa Oromiyaaf karaa saaqeera. Wayyaaneen gaaffiin Oromoo 100/100 tti deebii argatee nu waliin hiriiree jiraa jettee addunyaa sobaa turte guutummaatti jalaa fashalsee jira. Ammatti gama kanaan injifannoo argannee qofaan boonaa. Isa hafe yeroo isaatti ibsuun hin hafu. Maraachuun wayyaanee fi ijoollee waggaa 7tti dhukaasuuf dirqamtee kanadha. Kun ammoo boruu maal akka dhalchuu wayyaanee caalaa kan beeku hin jiru. Daabbileen siyaasaa Oromoo sochii kana fakkaatu kan gaggeessan Ummata keessa taa’aniitii malee, Biyya alaa taa’aanii akka hin taanee waan dirree irra jiru waan ta’eef, eessaa akka human biraa waamaa jirtan adda baafadhaa. Ummata irraa fagaachuun keessan, kan dhaabaa ta’uu hin danda’u.
G. WARRA IJOOLLEEN OFUMAA DHUMAA JIRTI JETTANIIF:-
Ijoolleen akkasumaan dhumaa jirtii, humni boodaa isaan dhaqabu hin jiru, sagantaa hin qabanii, gara itti deeman hin beekanii… kkf jettanii kanneen lallabdanii fi katabdan dhaabbadhaati yaadaa. Yoo, waan nuuti keessa hin jirree akkamiin raawwatamaa? jettu ta’ee, waan keessa jirtan hojjadhaati asi ba’aa. Waan deemaa jiruttis abbaa taanaa kan jettan yoo ta’ee, wareegama Oromoo irratti abbummaan hin jiruu, wareegama dhaaluun salphina. Wareegama baasuuf dhaaluun garuu gootummaadha. Kun hoodadhaa adaraa irraa dhaabbadhaa. Dhiiga ijoollee dhangala’aa jiru irra dhaabbannee wal-atakaaruun salphinaa, waan isiniif hin gallee waa hedduun waan jiruuf callisaa taa’aatii dhuma waan kanaa daawwadhaa. Garuu, gadi jabeessee kan isinitti himuu, sochiin ammaa kun humna qeerroo gaggeeffamaa fi masakamaa jiraachuu isiniif mirkaneessuun barbaada. Akkamiin kan jedhuf diina sooruu ta’aaf hin kaasu. Sochii qeerroo bara 2015 irraa injifannoo guddaan, iccittiin tokkollee odoo hin baanee, sochiin hundumtuu akka yaadametti gaggeeffamaa jiraachuudha.
Bara 2014 rakkoon sochi sana daangeesse jira ture. Humni qeerroo kun, Ummata gurmeessuun kunoo waggaa 15 hojjatee itti milkaa’ee jira. Muuxannoo ummata gurmeessuu ga’aa. Kana jechuun Ummata Oromoof abdii boriiti jechuudha. Humni qeerroo kun eenyu? Deebii kanaa diina mitii firruu hin beeku. Jabinni jiru kanadha. Humna qeerroo kanaa fi humna Qabsoo Bilisummaa Oromoo eegale gidduu jiru, gootummaa akkasii hin raawwanne. Kana jechuun qeerroon boruu Qabsoo Bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru dhaaluuf muuxannoo fi ogummaa ga’aa qabaaachuun nama hin shakkisiisu. Humna qeerroo kana keessa gantoonni fi ofittummaan kan maraatan hin jiran ta’a. Oromiyaa qofaa kanneen beekan ta’uus mala. Kanaaf, garatti deeman hin beekan hin jedhiinaa. Akka nama tokkoottis, akka gurmuttis, akka Afooshattis, akka waldaattis, kkf waan isin irraa egamu raawwadhaa. Humni kamuu hojii kanarra injifannoo Oromoo asi butu dhunfaan Oromoon ililchee kan simatu ta’uun beekamaadha. ABOn dhiiga Ummataa keessa seenee ba’uu kan didee, yoo xiqqaate, sadarkaa addunyaatti qabsoo OROMOOf dubbchaa fi wareegama baasaa kan jiru isa qofaa waan ta’eefi. Kanuma! Mirga Ummata Oromoo murannoon kan kabachiisu, Ummata Oromoo bifa barbaachisuun kan gurmeessu dhufnaan, Hogganoonni dhaabaa deggarsa barbaachisu akka taasisaniif hin shakku. Kanaaf, dhiiga QEERROO tti hin qoosiinaa! Ijoolleen gara deemtu hin beektuu jettan, gara itti deeman Waltajjii Gamtaa Awuroppaa keessatti argisisaniiruu hojii warra dabeessaa hin ho’isinaa!